Linux Mint dia tsy manaiky ny fitaovana USB | Avy amin'ny Linux
Indraindray (indray mandeha ihany no nitranga tamiko), Linux Mint dia tsy manaiky ny fitaovana USB, na dia mifandray amin'ny fomba samihafa na amin'ny seranana samihafa isika. Misy fiantraikany amin'ny webcam-nay ihany koa io olana io indraindray, saingy tsotra ny vahaolana.
Alohan'ny hanaovana ny vahaolana izay homeko anao dia mamporisika anao aho hamaky ilay lahatsoratra Fomba 5 hampiatoana sy hampifandray fitaovana USB nefa tsy esorinao eo amin'ny fitendry ny tananao aiza ny namantsika gasparfm Manazava amin'ny an-tsipiriany ny fihetsiky ny fitaovana USB sy ny fomba fitantanana azy ireo.
Raha ny ahy dia nijanona tsy niasa ny fitaovana USB taorian'ny fandefasana endrika sy fametrahana distro isan-karazany ao aminy.
1 Fanamarinana ny USB
2 Ny fanaovana Linux Mint hahafantatra ny fitaovan'ny USB
Fanamarinana ny USB
Ny zavatra nataoko voalohany rehefa nijanona tsy niasa ny fitaovana USB nataoko dia ny manamarina fa eken'ny alfisk miaraka aminy sudo fdisk -l ary nanandrana koa aho gparted, saingy tsy nisy nahafantatra ny USB-n'ireo roa ireo.
Avy eo mampiasa lsusb izay fitaovana hanehoana ny mombamomba ireo bus USB ao amin'ny rafitra sy ireo fitaovana mifandraika amin'izy ireo, vitako ny nanamarina fa nifandray tokoa ny USB, noho izany dia tsy olana tamin'ny tsimatra na fahatsiarovana izany.
Ny fanaovana Linux Mint hahafantatra ny fitaovan'ny USB
Ny dingana hamahana ilay olana izay tsy eken'ny Linux Mint ny pendrive -ko, dia tsotra sy mora. Mba hanaovana izany dia araho ireto dingana manaraka ireto:
Sokafy ny terminal ary mihodina ity baiko manaraka ity
Atsaharo ny solosaina.
Zahao amin'ny sudo fdisk -l fa ny fahatsiarovanao USB dia efa nitaingina ary mandeha tsara.
Ny ataon'ity baiko tsotra ity dia ny mampiditra ny modely "usb_storage" ao anaty kernel, izay indraindray mijanona ny famoahana azy.
Manantena aho fa ity vahaolana tsotra ity dia ahafahanao mamaha ity olana manelingelina ity ary afaka manome ny fitaovana USB ampiasainao ny fampiasana ilaina, tadidio fa izany dia mety amin'ny fitaovana sasany toy ny fakantsary nomerika, mp3 sy ny hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Linux Mint dia tsy manaiky fitaovana USB
Manana milina marobe amin'ny Linux MInt aho mandritra ny taona maro ary manana 18 sy 18.1 amin'izao fotoana izao ary tsy mahafantatra usb akory izany, zahao ireo fitaovanao.
Manana maromaro ihany koa aho, ao amin'ilay lahatsoratra dia maneho hevitra aho fa indray mandeha monja no nitranga tamiko ny vahaolana
Luigys, azafady, raha nanelingelina anao ny hevitro, tsy fikasana no nataoko, na dia hafahafa aza ny tsy mbola nahita na nandre na inona na inona momba an'io didy io, arahabaona tamin'ny asanao, avy amin'ny foko lalina. Misaotra anao.
Fanehoan-kevitra tena tsara sy feno fahalalam-pomba. Ankasitrahana tokoa.
Ny olona toa anao mamelombelona forum matetika.
Na dia eo aza ny fisalasalako, tsy fantatro raha hanome anao hahafantatra ny mampihomehy ny IQ anao….
… .Mahatakatra bebe kokoa azy ve ianao raha milaza aminao aho fa tena karazan'adala ireo karazan-kevitra tsy ilaina ireo?
Tsy mino ve ny mpangalatra fa marary daholo izy rehetra? Angamba ilay asshole dia ianao ary mieritreritra ianao fa izy rehetra ireo. Tsy mbola nanao fanamarihana diso toerana aho, raha ny tsara indrindra dia nesoriko ilay "go", koa aza mitsara ny hafa raha tsy manana NPI ianao. Misaotra anao. Raha ny tokony ho izy, aorian'ny 55 minoa ahy zazalahy, dia afaka ny ho tonga araka ny itiavanao azy ianao. Rehefa lehibe ianao dia hahatakatra.
Salama, ny marina dia indraindray manana an'io olana io aho ary manana solosaina vaovao nametrahako ny Linux Mint. Misaotra betsaka anao nizara.
Azo antoka fa nohavaozinao ny kernel ary izany no tsy nahafantarany ny USB, famerenana indray miaraka amin'ny kernel vaovao sy ny faran'ny olana.
Jereo, ny mpiara-miasa sasany izay mampiasa Ubuntu eo amin'ny birao findainy. Toy izany koa no nanjo azy - indraindray tsy nahalala fahatsiarovan-tena usb izy ireo - ary rehefa nanontany ahy izy ireo dia novaliako izy ireo mba hamerina ny solosaina ary dia izay. Tao anatin'ny 99% dia nivaha izy ireo. Ny kanto kokoa dia ny fanaovana azy araka ny asehon'ny lahatsoratra tsara nataon'i Luigys. Raha taloha dia manatanteraka lsmod | grep usb azontsika ny lisitry ny modely usb napetraka ao anaty kernel. Raha tsy hitantsika ny usb_storage, dia raha ampidirintsika izy araka ny lazain'i Luigys sudo modprobe usb-fitehirizana
Ary ho an'ny karatra fahatsiarovana? Sarotra amiko ny miasa amin'ny mpamaky karatra laptop. Rehefa manomboka indray dia mandeha indray mandeha fa raha esoriko ilay karatra ary averiko ao aminy dia tsy mandeha intsony.
Soa ihany fa tsy mampiasa Linux Mint aho, mampiasa Debian 8 aho ary miandry an'i Debian 9, ary vahaolana hafa fa tsy mampiasa baiko ao amin'ny terminal dia ny mampiasa gnome-disk-utility, nanana izany olana izany tao amin'ny Ubuntu aho ary namaha ny olako io olana io. olana. Merry krismasy jojojojojojoooo 🙂
zahao ny famatsian-jiro dia hoy izy:
Tsy nitranga tamiko izany, hijerena raha manana olana amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra ao amin'ny solosainao ianao.
Mamaly hanamarina ny famatsian-jiro
luiscabest dia hoy izy:
Rehefa novakiako io dia tsy nanana an'io olana io aho matetika, fa andro vitsivitsy rehefa atomboko amin'ny pendrive mifandray dia ekeny ilay izy, avy eo dia esoriko izy io ary rehefa averiko indray dia tsy ekeny intsony izany ary tsy maintsy averiko indray.
Mamaly an'i luiscabest
Na dia misy aza ireo baiko ireo dia tsy afaka mamaha ny olana aho
Ampio aho hametraka linux mint, ary tsy misy feo intsony izy izao, ary tsy mahafantatra usb koa. Izay azoko atao
Atahualpa dia hoy izy:
Miarahaba, nataoko izay notoroana hevitra tamin'ny paositra ary mbola tsy fantany ilay fitaovana, ekeny ny pendrive fa tsy fantany ny telefaona ambany.
Mamaly an'i Atahualpa
Raha fantatrao izany, azafady. Miseho ao amin'ny console kokoa izany na azonao atao ny manokatra azy na mampandeha azy ho modem, tsy miseho amin'ny mpitantana ny fisieo izany
EethKee dia hoy izy:
Mitranga amiko matetika izany, amin'ny alàlan'ny SanDisk 3.1 Cruzer Extreme Pro pendrive ihany ary ao amin'ny port USB 3.1 ihany. Rehefa ampitaiko amin'ny USB 2.0 dia ekeny foana izany, ary raha mametraka flash drive ao amin'ny 3.1 aho dia mandeha ihany koa. Miaraka amin'ny fitahirizana usb modprobe dia mandeha indray izy, saingy mivadika indray. Iray amin'ireo mistery miverimberina ao amin'ny solosainako.
Valiny amin'i EethKee
Efa nanandrana zavatra isan-karazany aho fa tsy nisy nandaitra. Io aloha dia niasa lavorary. Misaotra tamin'ny fampahalalana!
Manuel Marques Robles dia hoy izy:
Raha ny marina, ny Linux Mint dia nijanona tampoka tamin'ny fanekena ny kapilaiko ivelany sy ny usb tamin'ny seranan-tsambo rehetra, ary ny fampiharana an'io baiko io ary avy eo namerina azy io dia niasa toy ny mahazatra indray, tsy nilaina intsony ny hetsika. Misaotra betsaka anao nizara vahaolana mahomby!
Valiny tamin'i Manuel Marques Robles